5 Antony hanitsaka Alina Lamasinina In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Antony hanitsaka Alina Lamasinina In Eoropa
(Last Nohavaozina: 19/09/2020)
Na dia natory alina Eoropa fiarandalamby dia lasa zavatra atahorana ho lany tamingana (airlines teti-bola izahay mijery anao!), fiaran-dalamby tia mbola tsy manome ny! Fa ny fiaran-dalamby feno hafanam-po tia, na inona na inona mikapoka hopping nifindra sambo alina lamasinina sy nankafy ny hatsaran ' lavitra nefa tsy voatery handrava ny banky mba hahazo ny farany toerana halehany.
Raha ianao no mieritreritra ny alina fiarandalamby lavitra any ivelany nefa tsy antoka fa fiaran-dalamby alina no safidy tsara indrindra, no mamaky ny ambany.
FANAMARIHANA: Rehetra ny antony efa atambatra mahazo manoatra ny "Hanombohana, dia tsy handany 10+ ora drooling amin'ny sorony tahaka ny lohanao jiggles manohitra ny lamasinina varavarankely ".
Lamasinina alina no Cost-Mandaitra
Fa na dia lavitra eo amin'ny teti-bola (na ireo izay Te fa mandany bebe kokoa amin'ny sakafo tsara sy hizaha noho tiany amin'ny tapakila), alina fiarandalamby no tena teti-bola-namana safidy mba hifidy ny (indrindra ho diany maharitra). Afaka manantena ny vola mivoaka tapaka amin'ny antsasany rehefa manolo telo na efatra alina tao amin'ny trano fandraisam-bahiny (na dia iray aza ao amin'ny sokajy mora vidy kokoa) miaraka amin'ny mitovy isan'ny alina eo amin'ny fiaran-dalamby, fahavaratra momba $500! Raha tsy manan-tsaina izany teti-bola, tsy fantatray izay!
Time asa lehibe eo amin'ny Alina Lamasinina & fampiononana
Ny fahombiazan'ny ny fiarandalamby mandeha dia tsy azo lavina! Eoropeana fiarandalamby dia fifadian-kanina, ary izay rehetra voalamina ianao mitady amin'ny fitaterana safidy na inona na inona raha mandeha ho any amin'ny toerana akaiky toy ny Italia na ny toerana halehany fanampiny. Nandeha lamasinina dia mahafinaritra ho an'ny olona rehetra izay no mitady ny ho ao amin'ny andalana voalohany amin'ny fitetezam-paritra biraon'ny, ny toerana tena mozea na aiza na aiza-kafa izy ireo nihazona izany andraikitra izany nikasa handeha. Alina fiaran-dalamby hanome anao ny safidy mba tena hahazo ny sasany nandritra ny alina sisa ny fotoana. Ary mampiasa nony andro nankafy tsara tarehy sceneries avy teo amin'ny varavarankely, ary nandritra ny fiatoana fiaran-dalamby.
Lecce any Milan Lamasinina
Reggio Calabria ho any Milan Lamasinina
Salerno ho any Milan Lamasinina
ny tontolo iainana Friendly
Toy ny fiarandalamby tapaka, alina fiaran-dalamby no safidy tsara indrindra ho an'ny fitetezam-paritany tany. Koa satria izy ireo hamokarana kely lavitra noho ny CO2 isaky ny mpandeha fiaramanidina aza, izy ireo dia mety ho fitaterana ny ho avy. Noho izany, raha toa ianao ka ny tontolo iainana saina, fantatrareo ny lalana ho mandeha ianao manomboka izao.
Levanto ny Turin Lamasinina
La Spezia ho any Turin Lamasinina
Naples any Turin Lamasinina
Roma ho any Turin Lamasinina
Alina Lamasinina dia lehibe noho ny fanaovana Friends
Raha toa ianao ka nandeha irery, fiarandalamby no manome anao fahafahana mba hihaona be dia be ny olona avy any Eoropa, rehetra samy hafa. Mitadiava tombontsoa mitovy vitsivitsy mba hiresaka momba ny, ary ianao efa nanao namana mety ho amin'ny fiainana! Plus, inona no zava-dehibe kokoa indray mitoraka ity (raha kely indrindra fa ny lohahevitra izahay tamin'ny), ianao efa nahita azo antoka, azo antoka ny olona hizara ny matory amin'ny efitra! Alina fiarandalamby dia mahafinaritra, fa ny lafy ratsiny no afaka hiafara ao amin'ny trano rantsan-kazo miaraka amin'ny bunch ny olona izay snore, maimbo (miala tsiny!) na ... niharatsy ny fahasalamako be fotsiny. Noho izany, nahita ny vondrona lehibe izany ho amin'ny chat sy alina vitsivitsy ao amin 'ny tery mampitohy dia mahafinaritra!
Lyon any Nice Lamasinina
Paris ho any Nice Lamasinina
Avignon amin'ny Nice Lamasinina
Marseilles ho Nice Lamasinina
Ny Toerana mahafinaritra Antso
Wow, saika hadinontsika ny mampiditra ilay tombony maharitra mandrakizay amin'ny fiaran-dalamby antsoina hoe alina – Toerana mahafinaritra antso! Aza matory amin'ny alalan'ny Fjords, ny Alpes, ary ny hafa tsara tarehy toy izany koa sceneries. Nefa tsy mahatsiaro ho voatery hijanona mifoha rehefa nitranga ny orinasa Alemaina afovoan'i, na. Oh, ary - makà sary, na dia izany raha tsy amin'ny alalan'ny am-baravarankely!
Aoka isika hahafantatra amin'ny alalan'ny nibitsika antsika amin'ny @SaveATrain! , Azonao atao ny mahita ny hafa fantsona ara-tsosialy eo amin'ny fanambanin'ny Vonjeo-A-Train ary mazava ho azy, afaka hanafatra avy amintsika fiaran-dalamby tapakila.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-reasons-night-trains%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / en mba / de na / fiteny azy sy ny maro hafa.
#alina #trainlovers fiarandalamby Train Travel travelgermany travelitaly traveltips
Train Travel Austria, Train Travel Belzika, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby Hongria, Fiaran-dalamby any Italia, Nandeha lamasinina Luxembourg, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe